Farmaajo "Walaalkey Muuse Biixi wuu arkayaa Somaliland in aysan horay u socon karin..." - Jowhar Somali news Leader
Home News Farmaajo “Walaalkey Muuse Biixi wuu arkayaa Somaliland in aysan horay u socon...
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo caawa ka hadlayay Munaasabadda 26 June markii Gobolada Waqooyi ay qaateen Xornimada iyo markii la taagay Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Ayaa soo hadal qaaday wada hadaladii Jabuuti ee Soomaaliya iyo Somaliland, isagoo ka dhawaajiyay hadal lama filaan ahaa.
“Madaxweynaha Somaliland Walaalkey Muuse biixi waa nin Soomaali ah, aragti leh, waa nin waayo arag ah muddo dheer soo jiray wuu arkayaa in Somaliland aysan horay u socon karin, anagana aan horay u socon karin intaa kala maqanahay, geesinimadeeda iyo kartideeda waa leeyahay.
Wuuna bilaabay waxaa rajeynayaa inaan xoojino, Waa bilownay inaan Midnimo ka raadino walaalaheena Somaliland Ilaahey waa nagu guuleeyay, waxaa rajeynayaa wada hadalkaas inuu noqdo mid mira dhal ah, maxaa yeelay kalama maarano waa isu baahanahay dhinac walba.
Ayaa ehel iyo walaalo u nahay, waa ognahay waa aragnay khibradeeda waa heynaa in dhinaca kale in uusan dhaqaaqi karin, inta ay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno, iyagana ma dhaqaaqi karaan”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.